Okraina: Fialofan’ny Biby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2018 16:25 GMT
Ny 19 Aogositra, nandeha nitsidika toerana iray fialofan'ny biby ny mpanao gazety Okraniana Tanya Kremen, tanàna kely iray miorina ao ivelan'ny Hostomel Toy izao ireo heviny sy ireo eritreriny, izay nalefany tamin'ny blaoginy tao amin'ny Korrespondent.net:
Omaly, tany amin'ny fialofan'ny biby akaikin'i Hostomel aho. Tsy tena kisendrasendra no nahasarika ahy ho tao, ny antony dia novakiako tao anatin'ny sehatra fifampiresahana an'ny doggy.kiev.ua fa tsy misy sakafo tavela intsony ho an'ireo saka ao, ary satria tiako loatra ireo saka, nanapaka kevitra izaho sy ny namako ny hitondra sakafo any.
Nandany fotoana lava izahay nikaroka ilay fialofana – satria tsy nisy marika manondro ny làlana ahatongavana any aminy […].
Toy izao ilay fialofana: alika an-jatony vitsivitsy, tokotokony ho saka an-jatony ary vehivavy iray, Asya Vilgelmovna, izay manao asa betsaka tsy mampino ary mbola bebe kokoa aza. Misy zavatra tsy ampy: fotoana, vola, sakafo, olona vonona hanampy. Manana drafitra izy: goavana sady tsara: amndeha amin'ny ambaratonga, miroso miandalana, mba hamadihana ilay fialofana ho lasa ivontoerana fanampiana ireo biby, izay hikolokoloana azy ireo sy hampitàna azy ireo amina fiainana vaovao. Saingy hatreto aloha, ompiany amin'ny alalan'ny volany manokana sy amin'ny alalan'ireo fanampiana ireo zava-boahariny ireo – ary ireo biby, tokony lazaiko, salama tsara, na dia tsy ampy fifaneraserana amin'ny olona aza, indrindra indrindra ireo saka. Dokoteram-biby avy ao amin'ny anjerimanontolo misahana ny fambolena no mitsidika ilay fialofana: badainy ireo biby ary tsaboiny ireo izay mila izany, sady mampianatra ireo mpianany ihany izy.
Ny tena olana, na izany aza, dia tena sarotra ny mahita biby iray ho atsangana (hofidiana) – mbola tsy andalam-pitroarana izahay, mbola tsy andalam-pananganana ireo biby ao amin'ilay fialofana izahay, […], indrisy. Na tsara tarehy sy mamy avokoa aza ireo saka ao, misy koa ireo zava-boahary mahafinaritra sy mamy amin'ireo alika.
Fa mikasika ilay marika famantaran-dalana tsy ampy, nesorin'i Asya Vilgelmovna izany, mba hanajanonana ny fibosesik'ireo olona maniry hamindra biby iray narary tany amin'izy ireo: imbetsaka mitranga, nentina tany ireo alika berger alemà efa antitra, satria tena reraka be tsy afaka miambina trano ary izay no mahatonga azy ireo tifirina; navela tsy hisy anarana ireo zanaka alika sy ireo zavaboahary hafa, ary vao haingana, nisy olona nanipy harona misy zanaka saka 17 teo ambonin'ny fefy.
Manohy mieritreritra izay fomba hanampiana ilay fialofana aho, ary tsy manana hevitra mihitsy – satria na mikasa mba ho lasa mpanohana maharitra aza ny orinasa / antoko / olona sasany, tsy hamaha olana mihitsy izany: mila mitady trano ho an'ireo biby ireo izahay, sy olona maniry ny handray azy ireo, midika fa vonona hanangana / hitaiza alika tsara iray io olona io, tsy ilaina ho alika mahalala fomba, lafo vidy, ary tsy fantatro izay tsy maintsy ataon'io olona io mba ho vonona hanao izany…
Ireto fanehoankevitra vitsivitsy:
OMaty sahala amin'ny alika ny olon-tsika, alefa any amin'ireo fitaizàna zaza kamboty ny ankizy… Mba mieritreritra an'io ve ireo mpankafy biby be fangorahana?
Aha, iombonako hevitra ny hoe mitovy fiaviana ireo olana ireo
[…] Eny, mila resahina foana foana io, mba hiraikitra miandalana any anaty feon'ny fieritreretan'ny vondrom-piarahamonina. Saingy baribariana ny vahoakanay. Jereo izay mitranga manodidina ireo alan'i Kiev rehetra (eo ho eo amin'ny 50 km manodidina eo, satria lasa “madio kokoa” io aorian'izay). Nanamboaran”ireo alikan'olona ireo lapa ny vola nobodoin'izy ireo dia avy eo entin'izy ireo ny fakon'ny fanorenany (ary koa ny ambin-tsakafon'izy ireo) ho any anaty ala, ariany zato metatra vitsivitsy miala amin'ny “lapa ben'izy ireo”. Izany hoe, avy amin'ny alalan'ireo ala ireo ihany no nanamboaran-dry zareo ny fonenany – izay simbainy indray avy eo. Raha toa misalasala ny iray aminareo, afaka entiko mitsidika any ary asehoko anareo izany. Fanariam-pakom-panorenana, daba nampiasaina nasiana vokatra simika, ny potipotika fiara… Roapolo taona lasa izay, tao Irpen (30 km avy ao Kiev ), naniry nanerana ny tanàna ny olatra sy ny frezy dia (tamin'ny fotoana mbola nisy ala, raha ny marina dia nisy toerana fisindàna natokana ho an'ireo mararin'ny toberkilôzy, sns…tao). Mbola nahita diera maromaro teo fotoana vitsivitsy koa aho, tao anatin'ireo fetran'ny tanàna (15 taona lasa izay). Ankehitriny, tena mampitahotra ny mandeha ao anatin'io ala io – nofoanan'ireo mpiandraikitra vaovao ny hazo oaka sy hazo kesika tao an-tanàna, tsy azo nokitihina fahiny, sady nameno ny ala nandritra ny taonjato maro niaraka tamin'ny fanariam-pako taorian'ny fanorenana ny fonenan'izy ireo miedinedina. Iangaviako ianareo, minoa ahy, tsy ireo vaviantitra monina amina trano misy rihana tokana no nanao an'io… […]